Analysis of Somalia Breaking News Video Report by KEYDMEDIA ONLINE | KEYDMEDIA ONLINE
RW Xamsa oo ahmiyad gaar ah siinaya gurmadka abaaraha26 June 2022,11:53
Farriinta Madaxweynaha ee maalmaha xorriyadda26 June 2022,08:08
Fadeexad Musuqmaasuq oo ku habsatay Wasiir Bayle25 June 2022,19:16
Rooble oo taariikh dhaxal gal ah uga tagay siyaasadda Soomaaliya25 June 2022,17:18
Xasan Sheekh oo sameeyay balanqaad cusub25 June 2022,15:40
Barakacayaal hor leh oo soo gaaray duleedka Muqdisho25 June 2022,15:21
Muxuu yahay balan-qaadka RW Hamza u sameeyay Xildhibaanada?25 June 2022,13:33
RW Xamza oo ka gudbay caqabadii 1aad25 June 2022,11:26
Maxaa ka jira in Xasan Sh booqasho qarsoodi ah ku tagey Israel?25 June 2022,08:49
Fahadow fallaari gilgilasho kaagama harto
Wakiilkii Qatar ee Soomaaliya, Fahad Yaasiin, Fahad Daahir, Cabdiraxmaan Xaji ama Ubuu Camaar, hadba sida aad u taqaan ayaa bixiyay wareysi ka kooban shan qeybood kaasoo uu qaaday wariye Faarax Cabdulqaadir Gaylan oo sanadihii la soo dhaafay ka mid ahaa saxafiyiinta saldhigtay Turkiga ee miisaaniyadda ka helayay dowladdii hore
Dictator Farmaajo wuxuu Kansar ku yahay Soomaaliya!
Sida Khudbadii Farmaajo ay tartanka uga reebtay
Title: ISNIIN 27 JUUN
26 June 2022 25 June 2022
Xujooyinka siyaasadeed ee Xasan Sheekh hor-yaalla
Golayaasha Baarlamaanka oo leh kulan wadajir ah
Maamulka Gobolka oo ka aamusan caqabada heysata gaadiidleyda
Dictator aan dhargin!
Todobaadkaan, hal sanno ayaa kasoo wareegtay maalintii ay dhamatay muddo xileedka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Qoraalkaan Dr. Culusow ayaa uga hadalaya ciqaabta lagu muteystay ku Xadgudubka Muddo Xileedka Barlamaanka iyo Madaxweynaha JFS iyo Musuqmaasuqa Doorashada Federaalka.
Qiyaastii 2 ama 3 habennimo ee 26 iyo 27 Disember 2021, Madaxweyne hore Maxamed Cabdullahai Farmajo wuxuu soo saaray warsaxaafadeedyo uu ku fuliyo qorshe oo Ra'iisul Wasaare Maxamed Xussein Roble ku dhalliilayo, kaddibna shaqada uga joojiyo, si uu xukunka kula wareego.
Waa ku mahadsan yahay RW Roble inuu ku dhirriday difaaca dastuurka iyo gudashada mas’uuliyadda Barlamaanka Federaalka ku aaminay kaddib markii Madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmajo iyo kooxda taagereysa ku dhaqaqeen hirgelinta qorshe ay doonayeen inay xukunka dalka xoog kula wareegaan.
Kooxda dictator Farmaajo waxeey wajahayeen, halistii ugu cusleyd, ee soo wajahda intii eey Villa Somalia joogeen.
Ma jirto hab lagu saxi karo doorashada Barlamaanka Federaalka oo mar hore ka baxday nidaam dowladeedka ku saleysan ku dhaqanka sharciga iyo hab maamul leh hoggaan daacad ah, daahfurnaan, la xisaabtan iyo garsoor lagu kalsoon yahay. Waxaa laga been sheegay dhaartii magaca ilaahey lagu maray.
Maxaa la gudboon Midowga Badbaadada Qaranka?
Sababta asaaska u ah ku kalsoonaan la’aanta doorashada socota waxay tahay waayo aragnimada laga helay boob doorasho iyo gaboodfallo xad dhaaf ah ee muddo 5 sano ah markhaati laga wada yahay oo aan marna isbeddelin. Marna ma muuqan rabitaan lagu difaacayo dastuurka iyo danta guud. Waxaa mar kasta muuqda guluf lagu doonayo xukun maroorsi qaawan.
Hadalka Maxkamadda CQS oo la la’yahay
Ugu horreyn waxaa muhiim ah in hoosta laga xariiqo in sharciyan macnaha hadalka Xeer Ilaaliyaha MCQS uusan aheyn in eedeysanayaasha NISA ee kiiska Ikram Tahlil Faarax oo la la’yahay uusan aheyn inaysan aheyn dambiilayaal (not guilty). Go’aanka dambiga ma gelin (not guilty) waxaa iska leh Maxkamadda.
Guriceel Xuddunka burburka DG Galmudug
Todobaadkii lasoo dhaafay deegaanka Bohol ee Galmudug waxaa ka dhacay dagaal hubka culus la isku adeegsaday ee u dhexeeyay Ciidammada Dowladda Federaalka (DF) oo kaashanaya Ciidammada Dowlad Goboleedka Galmudug (DGG) iyo Xoogagga taagersan Ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca (ASWJ) ee uu hogaaminayo Sheikh Maxamed Shaakir Cali Xassan.
Aan Qiimeyn ku sameyno dagaalka Guriceel
Inkastoo aan laga adkaan xoogagga Ahlu Sunna Wal Jamaca (ASWJ), isla markaana aan la shaacin heshiis rasmi ah ee ku saabsan joojinta dagaalka, waxaa ilaahey mahadiis ah inuu joogsaday dagaalka lagu hoobtay ee afarta maalmood ka socday Guriceel.
Mowqifka qaldan ee Midowga Musharrixiinta
Midowga Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha JFS waxay ku kala qaybsameen weerarka Ciidammada DF oo kaashanaya Ciidammada Dowlad Goboleedka Galmudug (DGG) ku qaadeen Sheikh Maxamed Shaakir iyo taagerayaashiisa ku sugan Guriceel, dagaalkaaso dabajooga weerarkii Ciidammada DF+ DGG ku qaadeen Sheikha oo ku sugnaa Bohol.